SPY376 - OMG WIFI Desk Alarm Clock Hidden Spy Camera (NEW, preorder ihany !!) - OMG Solutions
nirohotra - Alefaso horonantsary feno 1080p HD miaraka amina masom-borona miafina miafina mba hahazoana sary miafina avy amin'ny smartphone na tablette amin'ny alàlan'ny fampiharana maimaimpoana.
DINGANA MOTION - Mampihetsi-po ny fampandrenesana amin'ny fotoana tena izy ireo sensor sensor, ary ny firaketana karatra SD mihetsika dia mandefa fampandrenesana amin'ny alàlan'ny lahatsoratra na mailaka.
CAMERA miafina - Fakan-tsary miafina fakan-tsary miafina miafina fakan-tsary miendrika fakantsary fakana sary miafina mifangaro miaraka amin'ny tontolon'ny tranonao na ny toeram-piasanao.
fitehirizana - Ny firaketana micro SD loop dia manoratra momba ireo rakitra tranainy indrindra rehefa lany ny habaka, mitahiry ireo rakitra rehetra miaraka amin'ny fitomboka fotoana sy daty, ary ny unit dia manohana hatramin'ny 128GB (tsy tafiditra, jereo ny kojakoja).
MORA SETUP - Apetraho amin'ny telefaona (iOS / Android) ny APP. Mora ny fametrahana. Azonao atao ny mijery horonan-tsary an-tserasera na aiza na aiza amin'ny telefaona finday misy Internet. Na dia tsy misy fidirana Internet aza dia azonao atao ny mampiditra karatra micro SD handraketana horonantsary.
Ity famantaranandro fanairana birao ity dia miasa tanteraka, fa miaraka amina fiolahana fanampiny, fakan-tsary miafina miafina ao anatiny ihany koa izy, iray manana fahaiza-manao WiFi izay mamela anao handefa horonantsary mivantana ny ankamaroan'ny fitaovana marani-tsaina. Mba hanaovana izany dia ampidino fotsiny ny fampiharana maimaim-poana amin'ny telefaoninao ary ampifandraiso amin'ny fakantsary WiFi ny fakan-tsary, ary vonona ianao handefa horonantsary horonantsary HD 1080p feno. Ambonin'izany, manana sensor mihetsika ao anatiny izy izay handefa fampandrenesana eo noho eo amin'ny app anao. Izy io aza dia manohana karatra SD hatramin'ny 128GB ny habeny. Fanampin'izay, rehefa misy ny fanetsehana ny fandraisam-peo mihetsika dia hahazo mailaka sy lahatsoratra manaitra anao amin'ny hetsika ianao. Ny fiasan'ny DVR dia manana endri-tsoratra tafahoatra izay manindry azy avy hatrany ireo rakitra tranainy indrindra amin'ireo vaovao rehefa feno ny karatra SD. Ity fakantsary miafina ity dia tsy ho diso toerana amin'ny trano sy birao ary afaka mameno ny telefaona findainao rehefa any an-trano ianao na misambotra hetsika tsy ilaina rehefa tsy eo ianao.
Jereo ny fanapahan-kevitra: Ratio 1080P / 720P / 640P
Visual Angle: 90 diplaoma
Fanamarinana Motion: Tifitra fakantsary mahitsy 6 metatra
Fahazavana kely indrindra: 1LUX
Fanaovana fitsaboana: 15-85% RH
Fahaizana farafaharatsiny: SD Card hatramin'ny 128GB (tsy tafiditra)
Fitaovana finday finday: Android / iOS